कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालमाथि सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्ताद्वारा आ*क्र*मण – ताजा समाचार
कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालमाथि सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्ताद्वारा आ*क्र*मण
तनहुँ, असोज १२ । तनहुँमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालमाथि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताले आ*क्रमणको प्रयास गरेका छन् । रिसिङ गाउँपालिकाको भवन उद्घाटनका लागि गएका डा. रिजालमाथि नेकपा कार्यकर्ताले बाटोमा आक्र*मण प्रयास गरेका हुन् ।
भवन उद्घाटन गर्नबाट रोक्न ठाउँ ठाउँमा रुख ढालेर बाटो अवरुद्ध गर्नुका साथै रिजालसहितका नेताहरु चढेका गाडीमा ढुं*गामुढा गरिएको थियो । बाटो अवरुद्ध गरेर बसेका नेकपा कार्यकर्ताहरुले हातहतियार र लाठीले आ*क्रमण गर्न खोजेको डा. रिजालले दाबी गरेका छन् ।
प्रहरी प्रशासनको आडमा नेकपा कार्यकर्ता आ*क्रमणमा उत्रिएको आरोप पनि उनले लगाए ।
नेकपा कार्यकर्ताको अवरोधका बावजुद नेता रिजाल रिसिङ गाउँपालिका पुगेर भवन उद्घाटन गरेका छन् ।
यता, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्न गएका नेताहरुमाथि मण्डले शैलीमा आ*क्रमण गरी नेकपाले फाँसीवादी च*रित्र देखाएको भन्दै भर्त्सना गरेका छन् ।
तस्वीर : खिला कार्कीको फेसबुक